Moments leh saaxiibo 39
Sidee qofku isaga difaaci karaa been-abuurka ama been-abuurka dadka kale?
Adigoo daacad u ah fikradda, runta ku jirta hadalka, oo kaliya ficilka. Haddii nin uusan u malaynaynin been maaha, oo runta ku hadlaa, been ama gunuunac. Marka la eego caddaalad darrada iyo cirridka aan caddaaladda lahayn ee adduunka, bayaankani ma muuqan doono in lagu soo saaro xaqiiqda. Hase yeeshee, waa run. Qofna ma rabo in la sheego; cidina ma rabto in la been sheego; Laakiin dadka intooda badani been bay sheegaan, oo kuwa kale way diidaan. Waxaa dhici karta in been abuurku yahay mid yar, mid been ah; Waxaa laga yaabaa in ereyga qarsoodiga ah lagu sameeyo kaliya habka joornaalka, si uu u wada hadlo. Si kastaba ha ahaatee, been beel waa been, hase yeeshee waxaa laga yaabaa in midab ama mid la yiraahdo. Xaqiiqdu waxay tahay, way adagtahay in la helo cid kasta oo si daacad ah u fikirta, si run ah u hadla oo u dhaqma si sax ah. Mid waxaa laga yaabaa inuu qirto bayaankan in uu guud ahaan run u yahay dadka kale, laakiin waxay u badan tahay inuu diido haddii loo isticmaalo. Diidmadiisa, si kastaba ha ahaatee, waxay caddaynaysaa cadeynta dhabta ah ee kiiskiisa, waana uu yahay dhibbaneha. Caqli-xumada caalamiga ah ee ka soo horjeeda been abuurka iyo been-abuurka been-abuurka guud ahaan, laakiin aan yareeynayno faa'idoyinkeena ku saabsan waxtarka, sababaha iyo haynta badeecooyin badan iyo badeeco ah badeecada wareegga firfircoon, oo keena kuwa leh inay la ha ahaato mid halis u ah ama dhaawacan by been iyo qaza.
Been ah ayaa ku jirta dunidu anshaxeed waxa dilka ku jira duniga jirka. Qofkii isku daya inuu dilo ayaa dila jidhka jirka. Qofka been ka sheega dhaawacyo kale ama isku dayey inuu burburiyo dabeecadda kale. Haddii dilku rabo inuu ka soo galo hubkiisa inuu ku jiro jidhkiisa jirka ee loogu talagalay, ma uu ku guulaysan doonin isku daygiisa dilka, waxaana dhici karta in marka la qabto uu ku ciqaabi doono ciqaabta falkiisa. Si looga hortago soo galitaanka geedka hubka ee hubka, dhibbanaha loola jeeday waa inuu naftiisa ilaaliyo jaakad hub ah ama wax kale oo diidaya weerarka. Qofka dilka ah ee dunidu waxa uu u adeegsadaa been, been, gardarro, sida hubkiisa. Iyadoo kuwaasi waxa uu soo weeraray dabeecadda uu u leeyahay dhibbanaha loogu talagalay. Si looga hortago hubka gacankudhiiglaha, dhibbanaha loola jeeday waa inuu haystaa hubkiisa. Daacadnimada fekerka, runta ku jirta hadalka, iyo caddaaladda ficil ahaaneed, waxay ku dhisnaan doontaa isaga oo ku saabsan hubkiisa oo aan loogu talagelin weeraro. Hubkaas lama arki karo, laakiin maaha mid been sheega ama been sheega, mana arag asal. In kastoo aan la arki karin, waxyaabahan waa mid dhab ah marka loo eego bistoolad, mindi, ama armaajo bir ah. Been ah ama been sheegasho ma saameyn karto dabeecadda qofka ilaaliya daacadnimada iyo runta, sababtoo ah runta iyo daacadnimadu waa kalsooni joogto ah; been iyo gunuunac ay yihiin kuwa iska horjeeda, oo waxay yihiin kuwo khiyaano leh. Been ma noqon karto mid run ah. Been ka sheegi kari waayeen daacadnimada. Hase yeeshee, haddii ay noqoto inuu daacad u noqdo fekerkiisa, qofku wuxuu u maleynayaa inuu been sheego oo uu beeno been ah, fekerkiisa iyo hadalkiisana wuxuu ka dhigaa dabeecaddiisa u nugul iyo diidmada beenlaha ama been abuurka ah ee loogu talagalay isaga. Hadaba, haddii dabeecaddiisu ay ilaaliso hubka daacadnimo ah ee ka muuqda dareenkiisa iyo runta ku hadalka, dabadeed hubka uu ujeedkiisu ujeedkiisu wuu ka soo horjeesan doonaa kii iyaga tuuray, oo isagu naftiisa u ciqaabi doona cawaaqibkiisa. Kaasi waa sharciga caalamka. Qofkii waxyeello u geysta been abuurka iyo been-abuurka ayaa sidoo kale la kulmi doona been-abuurka kuwa kale, inkastoo ciqaabta laga yaabo in dib loo dhigo. Waxay u fiicantahay qofkii ujeedadiisu tahay inuu dilo qof kale si uu ugu celiyo isaga iyo hubkiisa daacadnimada iyo runta ah ee dhibbanaha loogu talagalay, sababtoo ah wuxuu u badan yahay inuu arko oo uu si dhakhso ah u arko ficilka feker qaldan iyo ficil, iyo sida ugu dhakhsaha badan waxay u bartaan inaan been sheego, maaha inay wax qaldan sameeyaan, sababtoo ah isagu ma samayn karo khalad isaga oo aan dhaawac u geysan. Kadib marka uu ogaado in uusan aheyn wax khalad ah haddii uu ka fogaan lahaa ciqaabta qaldan, wuxuu si dhakhso ah u baran doonaa inuu saxo sababtoo ah waa sax iyo ugu fiican.
Wax yar "been" caddeyn ah iyo hadal been abuur ah maaha waxyaabo aan waxyeello lahayn oo ay u muuqdaan inay yihiin indho la'aan. Waxay yihiin abuurka dilka iyo dambiyada kale, inkasta oo waqti badan ay soo faragalin karaan beeritaanka abuurka iyo goynta midhaha.
Marka qof been sheego oo aan la ogaan, wuxuu hubaa inuu u sheego mid kale, iyo mid kale, ilaa inta la ogaado; oo wuxuu noqonayaa beenaalayaal been ah, xaqiijin in caado. Marka uu been sheego, wuxuu been-abuur u sheegaa been kale inuu ku qariyo ilbigiisa, saddexaadna wuxuu qarin karaa labadii, iyo sidoo kale illaa uu been ka sheego midba midka kale oo u taagan markhaati xoog badan isaga. Markii ugu horreysay ee uu ku guuleysto wuxuu ku daray in tirada uu been ka sheegayo, in badan oo la wareersan yahay oo la jajabiyey wuxuu noqon doonaa marka carruurtan oo ah fekerkiisa loo yeedhiyo in ay marqaati ka noqdaan isaga. Mid ka mid ah ilaaliya daacadnimada, runta, caddaaladda, fekerkiisa iyo hadalka iyo ficilka, maaha kaliya inuu iska ilaaliyo weerarada been abuurka iyo been-abuurka; wuxuu barayaa sida uusan u weerarin kuwa isaga weerari lahaa iyo sida ay isu difaacayaan iyagoo haysta hub aan la arki karin oo aan la arki karin. Wuxuu noqon doonaa qof raaxo leh oo run ah sababtoo ah awoodda anshaxeed ee dadka kale lagu dhiirigeliyay inay horumariyaan. Waxa uu noqon doonaa isbedel dhab ah, oo lagu dhisayo daacadnimada, runta iyo caddaaladda fekerka iyo hadalka. Sidaa darted, dembi joojinta, guryaha dhismaha ee saxitaanka ayaa la joojin doonaa iyo xabsiyada la baabi'iyay, iyo maskax furnaansho ah, ninku wuxuu yeelan doonaa farxad wuxuuna ogaan doonaa xoriyadda.